Edin Dzeko Oo Candhuuf Indhaha Uga Buuxiyey Garsoore Kulankii Fadeexaddu Ka Raacday Kooxdiisa Roma - Latest football news
Edin Dzeko Oo Candhuuf Indhaha Uga Buuxiyey Garsoore Kulankii Fadeexaddu Ka Raacday Kooxdiisa Roma
Weeraryahanka kooxda kubadda cagta Roma ee Edin Dzeko ayaa sugaya ciqaab adag oo uga timaadda xidhiidhka kubadda cagta waddanka Talyaaniga, kaddib markii uu ku kacay dhaqan-xumadii ugu weynayd oo uu candhuuf indhaha kaga tufay garsoorihii dhex-dhexaadinayey ciyaartii kooxdiisu la yeelatay Fiorentina.
Roma ayaa xalay ay ku dhacday ceeb weyn, waxaana 7-1 ku baabi’isay Fiorentina oo ay wada ciyaarayeen tartanka Coppa Italia, waxaana Edin Dzeko loo taagay kaadh cas oo toos ah.
Edin Dzeko ayaa khalad uu sameeyey waxa uu garsooruhu ku go’aansaday inuu casaan toos ah siiyo, hase yeeshee weeraryahankan oo lagu tilmaamo laacibka xilligan ugu wanaagsan kooxda ka dhisan caasimadda Talyaaniga, ayaa isaga oo hortaagan garsooraha waxa uu kaga falceliyey inuu candhuuf ku tufo.
Xidhiidhka kubadda cagta Talyaaniga ayaa fadhi ka yeelan doona arrintan, waxaana ay kasoo saari doonaan ganaax culus oo ay huwin doonaan Dzeko, laakiin wararka hordhaca ah ayaa waxay tibaaxayaan in ciyaaraha laga mamnuuci doono shan ciyaarood illaa toban ciyaarood inta u dhaxaysa.
Ganaaxa la filayo in la saaro ayaan saamayn doonin ciyaaraha horyaalka ee Serie A, laakiin ku koobnaan doona Coppa Italia oo ay haddaba kooxdiisu ka hadhay.
Si kastaba ha ahaatee falka uu ku kacay Dzeko ayaa ah mid layaab ah oo aan laga filaynin ciyaartoy heerkiisa oo kael ah.